ဟပ္ပီးနယူးရာ ၂၀၁၆ – Happy New Year 2016 –2| Myanmar Gazette News Media Forum Network
Education » ဟပ္ပီးနယူးရာ ၂၀၁၆ – Happy New Year 2016 – 2	6
ဟပ္ပီးနယူးရာ ၂၀၁၆ – Happy New Year 2016 – 2
Posted by Kyaemon on Jan 2, 2016 in Education, Entertainment, Photography, Society & Lifestyle, Style & Beauty, Travel |6comments
ဟပ္ပီးနယူးရာ ၂၀၁၆–၂ နှစ်သစ်ကြိုပွဲကို နယူးရောက်မြို့မှာ နှစ်စဉ် နှစ်တိုင်း စည်ကားသိုက်မြိုက်စွာကျင်းပကြတယ်၊
ချိန့်ချိန့်သဲ ဆင်နွဲတြ တယ်
သန်ကောင် ၁၂ နာရီထိုးဘို့စက္ကန့် ပိုင်း
တဲ့ Big Apple ပန်းသီး စက်လုံး ကိုလိုက် ကာ၊
လူတွေကနှစ်သစ်ကူးတာကို စက္ကန့်ပိုင်း အတိအကျနဲ့ဝမ်းပန်းတသာ တကူးတကန့် ကြိုကြ
ခွေးကလေးကို သားရတနာ၊သမီးရတနာ လိုယုယပိုက်ထွေးပြီး၊
ပန်းသီးလုံး ကျဆင်း နေတာကိုတအံ့တဩ တမျှော်မျှော်နဲ့လာ
နံမယ်ကျော် တေးသံရှင် Carrie Underwood ကာရီ အန်ဒါဝုဒ်
၂၀၁၅ က နှစ်သစ်ကူးပုံတွေ
ပန်းသီး စက်လုံး ဆင်းဘို့နာရီမျှော်စင်ကြီး
အင်္ဂလိပ်ဘာသာထုတ် ဆင်ဟွာသတင်းစာ ဌာနခွဲလဲ အဲဒီနားမှာရုံးဖွင့်ထား
Kyae Mon has written 658 post in this Website..
View all posts by Kyaemon →	Blog
မင်း ခန့် ကျော် says: ပျော်စရာကြီး
ဦးကြောင်ကြီး says: .တလှုပ်ဒလျှို ကြေးမုံဂျီး
အူးမြောက်မြောက် - ( Book.E) says: ဟပ္ပီး နျူးလျား
အိုင်ခု လန့်နိုးမှာစိုးလို့ တိုးတိုးပဲ အော်တွားတယ်
ဇီဇီခင်ဇော် says: ကြည့်သွားတယ်။
kai says: နယူးယောက်က.. အမေရိကပြည်မှာ. ပထမဆုံး… နှစ်သစ်ကို ထိတွေ့လိုက်တဲ့မြို့…။
အယ်လ်အေက.. နယူးယောက်ထက်…၃နာရီနောက်ကျပြီးမှ.. နှစ်သစ်ရသဗျ..။
Mike says: .အရှေ့တိုင်းကိုမမှီပါဘူး သဂျီးရာ..ဟီဟိ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike LeaveaComment Cancel replyYou must be logged in to postacomment.	My Points	You need to be logged in to view your points.